Lius Suares Oo Rikoor U Dhigay Horyaalka Spian.
Home Horyaalka Spain Lius Suares oo Rikoor u dhigay horyaalka spian.
Xiddiga reer Uruguay ayaa ka sii hormaray saaxiibkiisii hore ee kooxda Barcelona Lionel Messi isagoo ka faa’ideystay kooxda Celta vigo uu ka dhaliyey labo gool.
Luis Suarez bilowgiisii ugu fiicnaa ee nolosha Atletico Madrid ayaa sii socday habeenkii Isniinta isagoo jabiyay rikoor uu dhigay Cristiano Ronaldo oo uu dhaliyay markii uu yimid real madrid.
Waxa uu dhaliyay 16 gool 17kii kulan ee ugu horeysay ee uu u saftay Atlético de Madrid horyaalka LaLiga, isagoo noqday ciyaaryahanka ugu dhaqsaha badan inuu gaaro 16 gool isla kooxdii uu ka dhaliyay Ronaldo xilli ciyaaredkii 2009/2010 waxaana uu dhaliyey 15 gool.
Xiddigii hore ee Ajax iyo Liverpool ayaa ah ciyaaryahankii ugu horreeyay ee dhaliya 16 gool 17-kii kulan ee ugu horreysay ee uu u ciyaaro koox ka ciyaarta horyaalka heerka koobaad ee Spain qarniga 21aad.
Goolkii hore ee ugu fiicnaa 15 gool oo isku mid ah ayaa waxaa dhigay Cristiano Ronaldo intii lagu guda jiray bilowgiisii cajiibka ahaa ee uu u dhaliyay Real Madrid isagoo ka yimid kooxda Manchester United sanadkii 2009.
Suarez ayaa muhim u ahaa xilli ciyaareedkooda cajiibka ah ilaa haatan Waxa uu hogaamiyaa xidigaha ku tartamaya gool dhalinta horyaalka isagoo dhaliyay in ka badan kabtanka Barca Lionel Messi.
Previous articleFalanqeynta Kulanka Darbiga: Juventus Vs Inter Milan ee Koobka Coppa Italia
Next articleInaan la ciyaaro messi waxay noqon laheyd Ri’yo Rumoowday Verrati oo dareenkiisa ka hadlay ka hor kulanka barce iyo PSG.